हप्तामा कतिपल्ट शा रिरिक स म्प र्क गर्दा बच्चा बस्छ ? जन्नकाे लागि याे पढ्नुहाेस ! - कैफियत
हप्तामा कतिपल्ट शा रिरिक स म्प र्क गर्दा बच्चा बस्छ ? जन्नकाे लागि याे पढ्नुहाेस !
Posted on २०७८ जेष्ठ २१, शुक्रबार १३:१३ गते Author कैफियत	Comment(0)
डा. सबिना सिम्खडाले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो । तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सह योग गरेकी छन् ।
निःसन्तानपन भएर उपचारको लागी ने पाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार संभव छ भनेर देखाएकी छन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपन (बाँझोप ना)को बारेमा जनचेतना फैलाउँदै त्यसबाट जोगिन समेत डा. सिम्खडा आग्रह गर्छिन् ।
बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थिाई साधनको प्रयोग बिना शारिरक स*म्पर्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँझो पना हुने डा. सिम्खडा बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बाझोपना हुने संभावना हुन्छ ।
उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने संभावना रहन्छ । दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा महिनावारी भएको १० दे खी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउन उनी आग्रह गर्छिन् ।
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भार तबाट बाझोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भार तीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँझोपना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं। हेरौ यो कुराकानी..
Tagged बच्चा, शारिरिक सम्पर्क
राजकुमारको ‘यौन भोक बढाउन’ दुर्लभ पन्छीहरूको सिकार
Posted on २०७७ चैत्र १८, बुधबार १५:३१ गते Author कैफियत
सहेर बलोच बीबीसी उर्दू, पास्नी । सन् १९८३ मा दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानको एउटा सानो तटीय नगर पास्नीस्थित गाडी भाडामा दिने एउटा कार्यालयमा दुई सैनिक अधिकृत आए। एक जनाले कार्यालयका साहूलाई सोधे: “के तपाईँसँग राम्रो कार छ? हामीलाई एक अरब शेखलाई पान्जगुर लैजानुछ।” उनले छ भने अनि आफ्नो छोरा हनिफलाई गाडी देखाउन अह्राए। उक्त गाडी राजकुमार सुरुर […]
Posted on २०७८ असार ९, बुधबार १९:५६ गते Author कैफियत
हाम्रो समाजमा एउटा पुरानो भनाई पनि छ ४० लागेछ बैस जागेछ । सायद यो भनाई भित्र केही बास्ततिक्ता पनि छ । दुई छोराकी आमा भर्खर जुँ’गाको रेखी ‘बसे’को तन्नेरीसँग ‘चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् ‘वि’देशमा हुने श्रीमानको माया नपाउने […]
छि’टो छि’टो विर्य झर्ने समस्या छ ? अपनाउनुहाेस् यस्ताे बिधि‍‍‍
Posted on २०७८ बैशाख १४, मंगलवार १४:०१ गते Author कैफियत
हजुरलाई थाहै हुनुपर्छ, प्राय सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा शी’घ्र वी,र्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । अहिले आफू तथा आफ्नो यौ,नजोडीले चाहेको समयभन्दा चाँडो वी,र्यस्ख,लन भए त्यसलाई शी;घ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । यो,निमा घर्षण नै गर्न नपाई यो,निमौ वी,र्य स्ख,लन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौ,न,सम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या […]
यस कारण जीवनको मध्य उमेरमा महिलामा यौन सक्रियता बढी हुन्छ